Umhlahlandlela Ovela Ku-Semalt Ukuhlanza i-Chrome Yezikhangiso, i-Pop-Ups ne-Malware
Ngokuvamile, abantu bakhononda ukuthi i-Google Chrome yabo ibuye ibuye ibuyele njalo kumawebhusayithi angafuneki kanye nezikhangisi ezivelayo. Lezi zinto zivela uma sidlulisa amehlo ku-intanethi noma sizama ukufinyelela amaphrofayela ethu wezokuxhumana. Uma ubona izinto ezinjalo nsuku zonke, kunamathuba ukuthi uhlelo lwakho lwekhompiyutha lutholwe ngezinhlelo ezingafuneki noma i-malware.
uFrank Abagnale, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt , uchaza ukuthi ungakhulula kanjani i-Chrome yakho kwizikhangisi ezicasulayo, ama-pop-ups, ne-malware.
Izinkinga nge-Google Chrome
Ngenkathi upheqa i-intanethi, uma ubona noma yikuphi kulezi zinkinga nge-Google Chrome, kungenzeka ukuthi ufake uhlelo oluthile noma uhlelo lwe-malware kwikhompyutha yakho:
Izikhangiso ze-pop-up zivela kaningi.
Imiphumela yakho ye-injini yokusesha noma ikhasi lasekhaya le-Chrome lishintsha izilungiselelo zalo noma lisethelwe kwenye iwebhusayithi ngokuzenzakalelayo.
Uma ubona amathuluzi wamathuluzi angaziwa, izandiso ze-Chrome noma izinto ezingavamile kanye ngehora.
Uqondiswa kabusha kumawebhusayithi awaziwayo kanye nezixhumanisi ezingalindelekile zohlelo lokusebenza.
Indlela yokuhlanza i-Chrome yezikhangiso ezingafuneki, ama-pop-ups, ne-malware
Okokuqala, kubalulekile ukuthi ungalanda isofthiwe engaziwa noma izinto ezivela kwi-intanethi..Kumele futhi ugweme ukuvakashela amawebhusayithi amadala ngoba ikakhulukazi aqukethe amathrekhi wegciwane ne-malware.
Ungahlanza i-Chrome yezikhangiso ezingafuneki, ama-pop-ups, ne-malware ngokugcina engqondweni izinto ezilandelayo.
1: Susa izinhlelo ezingadingeki kusuka ku-Chrome (Windows kuphela)
Uma usebenzisa iWindows noma isimiso sokusebenza esifanayo, kufanele usebenzise Ithuluzi le-Chrome Cleanup elihlola ikhompyutha yakho ngezinhlelo ze-malware nezinsolo, unikeza izindlela ezinhle zokuzisusa zonke. Uma usebenzisa ikhompyutha ye-Linux noma ye-Mac, kufanele uhambise isinyathelo esilandelayo. Iya kukhetho lwe-Chrome Cleanup Tool kukhompyutha yeWindows bese ulanda isofthiwe ngokushesha ngangokunokwenzeka. Chofoza Yamukela futhi Ulayishe futhi unike isikhathi sokuthola ukulanda. Uma ukulanda sekuphelile, iWindows izokucela ukuba usebenzise ifayela noma cha; kufanele uchofoze inketho ye-Run ukuze i-Chrome Cleanup Tool ingakwazi ukuskena ngokunembile idivayisi yakho. Kufanele futhi uchofoze inketho yokukhipha ukuze ususe izinhlelo ezisolisayo namagciwane.
2: Susa izinhlelo ezingafuneki (wonke amakhompyutha)
Uma uthenge noma ulanda uhlelo lokulwa ne-anti-malware noma uhlelo lwe-antivirus, kufanele ulifake ngokushesha futhi ugijimele ukuqeda amafayela anobungozi futhi asolisayo. Ungazama futhi i-Malwarebytes; le software ye-anti-malware ihle kakhulu kunezinye izinhlelo ezifanayo njengoba isusa amafayela angadingekile nedatha kusuka kudivayisi yakho yekhompyutha phakathi nemizuzu. Uma ufake le software, kunamathuba ukuthi Ithuluzi le-Chrome Cleanup ngeke lisebenze kahle.
3: Hlela kabusha izilungiselelo zesiphequluli sakho (wonke amakhompyutha)
Ungasetha kabusha izilungiselelo zesiphequluli sakho ukuze ususe ama-malware namagciwane. Ngenxa yalokhu, kufanele uvule i-Chrome kumadivayisi wakho wekhompyutha bese uchofoza ku-Izinketho zezilungiselelo. Khona-ke kufanele uchofoze okukhethwa kukho okuthuthukisiwe nokusetha kabusha ukusetha kabusha izilungiselelo zesiphequluli sakho, futhi lokhu kusebenza kunoma iyiphi ikhompyutha noma amadivayisi weselula. Uma ngabe ubhekene nanoma iyiphi inkinga, sincoma ukuba ubike inkinga kumhlinzeki we-software noma uhlole i-Forum Yosizo lwe-Chrome.